IXESHA LEWESTWORLD 4 KUNYE NAYO YONKE INTO EKUFUNEKA UYAZI - IINKQUBO ZETV
IWestworld lelinye lawona manqaku kulindeleke ukuba abuye kulo nyaka. Yenziwe nguJonathan Nolan kunye noLisa Joy,
IWestworld lelona chungechunge kulindeleke ukuba lubuye kulo nyaka. Yenziwe nguJonathan Nolan kunye noLisa Joy, uthotho lwenza inqaku lazo ngo-2016. Ngoluhlu oluqhubekayo lokuphumelela amabhaso amaninzi kwinkqubo. Ixesha lesithathu liphume ngoMeyi 2020 kwaye lanceda abalandeli ukuba badlule kwixesha lokutshixa kancinci. Ixesha lesithathu liza liphethe isenzo esinamandla.
Idrama yesayensi iyintsomi kwinkcubeko. Ngabalandeli abalinde isahluko sesithathu soluhlu kakhulu. Ixesha lesithathu lomboniso lalishiye abalandeli kuninzi abanokucinga ngako. Ukwenza ukubuya kweXesha lesi-4 kubaluleke ngakumbi. Xa kuninzi ukuxoxa ngexesha elizayo, makhe singene ngqo.
Ixesha leWestworld 4: Kukhutshwa nini?
Ixesha lesithathu lomboniso lilonke ngaphandle kobugcisa bexesha nguJonathan noLisa Roy. Isibhengezo malunga nexesha lesine senziwa nangaphambi kokukhutshwa kwexesha lesithathu ngo-Epreli 2020.
Ukufota ixesha lesithathu liqale ngo-Epreli 2019 kwaye lakhutshwa ngoMeyi.
Ngabadali abahamba bejikeleza umhlaba wonke ukugqibezela imiboniso bhanyabhanya.
Ixesha lesithathu yaqala yabhengezwa ukuba ikhuphe ngoMatshi 15, 2020. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo namanye amaxesha amabini, iWest World yayingezizo iziqendu ezilishumi ngeli xesha. Endaweni yoko, ixesha lesi-3 lalineziqendu ezisibhozo ubude. Kodwa oko akuthethi ukuba ibali liziva lingaphelelanga.
Ngapha koko, umhla wokukhutshwa kwexesha lesine luqikelelo lwasendle lokwenza ngoku. Nangona kunjalo kuthatha unyaka omnye ukudubula kwaye ukhulule umboniso, ke olona qikelelo lubalulekileyo ngaxa lithile ngo-2022.
Ixesha leWestworld 4: Yintoni iCast?
Ukuphoswa kwesizini ezayo akuyi kutshintshwa kakhulu. Uninzi lwamalungu abalandeli abathandayo be-cast iseti ukuba babuye ngeli xesha. U-Evan Rachel Wood, uThandie Newton noJeffrey Wright, bonke baya kubuya njengenxalenye yabadlali abaphambili.
Ngexesha lesithathu, bekukho ubuso obutsha njengoAaron Paul, uLena Waithe, uMarshawn Lynch, uVincent Cassel, uScott Mescudi, uJefferson Mays, uJohn Gallagher, uTommy Flanagan. Bonke badlala indima ebalulekileyo kwisiqwenga sechungechunge.
isithunzi kunye nexesha lethambo 2 umhla wokukhutshwa kwe-netflix
Umboniso obuyayo nguTessa Thompson, uEvan Rachel Wood, uThandie Newton, uJeffrey Wright, uEd Harris, uLuke Hemsworth, uSimon Quarterman noRodrigo Santoro.
Ngapha koko, abadlali bexesha lesine abaqinisekanga okwangoku. Ke sinokuthi sithathe isiphelo sesithathu sonyaka ukuba eyona nto iphambili iya kubuya.
Njengoko u-Ed Harris ebulawa ekupheleni kwesizini yesi-3 kwaye endaweni yakhe kungeniswe umphathi, siza kuhlala simbona uEd Harris kulo mboniso, kodwa ngaba siza kubona okungakumbi ngeNdoda eMnyama? Ngumbuzo ongaphezulu lowo.
Ixesha leWestworld 4: Liza kuba yintoni ibali?
Uthetha malunga nexesha lesi-4 sele esenza ukujikeleza kumanqanaba ahlukeneyo. Oku kwenza ukuba kunyanzele abaqulunqi ukuba basete ibali lonyaka olandelayo ngeli xesha lokujikeleza. Abadali bahlala befihla kakhulu ngomsebenzi wabo. Kodwa kuqinisekile ukuba ixesha leSine liza kulandela kanye emva kwexesha lesithathu elishiyekileyo.
Ngexesha lesithathu, ibali yayiyinto evula amehlo kwiDolores. Wenza indlela yakhe yokuphuma eNtshona yeHlabathi angene kwilizwe lokwenyani ngo-2058. Apho udibana noCaleb kwaye eza kuqonda unyango lwezinto ezingezizo kwilizwe lokwenyani. Kwelinye icala, uMaeve ubalekela e-Italiyali yenkulungwane yama-20. Kuninzi ukungcola ekufuneka kujongiwe. Sinokubona uAaron Paul ebuya kwisizini yesine edlala umlinganiswa wakhe uCaleb. Akukho nto ikhonkrithi ngoku malunga nebali lexesha lesine.
Ukuqukumbela, uthotho lukaJonathan Nolan kunye noLisa Roy yenye yezona zinto zibalulekileyo zenzululwazi kwishishini. Kwaye ngexesha ngalinye lonyaka, ibali liyanzima ngakumbi kwaye linomdla ukubukela. Ngokuphoswa okunje kunye nokujijwa kuwo wonke umzuzu ongalindelekanga. Lo mboniso sisihogo esinye sewotshi.
Ngaba ferrell yeyona movie
Amaphupha amabi ekhitshini amaxesha 1 isiqendu 3
mob psycho 100 isizini 3 iqinisekisiwe
ezothando zintle kwi-anime
I-goworth netflix isizini ye-3 yomhla wokukhutshwa
ixesha le-haikyuu anime 5